सिटौलाले छाडे पौडेलको साथ, पौडेलले दिए देउवालाई अल्टिमेटम « Postpati – News For All
सिटौलाले छाडे पौडेलको साथ, पौडेलले दिए देउवालाई अल्टिमेटम
असोज १३, काठमाडौँ । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले विधानविपरीतका निर्णय सच्याउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई अल्टिमेटम दिएको छ।
देउवासँग असन्तुष्ट पक्षले सोमबार पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य गरी २७ जनाको हस्ताक्षरसहितको विरोधपत्र केन्द्रीय पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई बुझाएको हो।
विभाग खारेजी र क्रियाशील सदस्यता पारदर्शी नभए पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिनेदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिबाट राजीनामा दिनुपर्ने दबाब पौडेल पक्षमा देखिएको छ। महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएपछि पार्टीमा विधिविहीन, अराजकता, आपसी अविश्वास, द्वन्द्व, पक्ष–विपक्षका रूपमा ध्रुवीकृत भएको निष्कर्ष पौडेल समूहको छ। ‘यस्तो पक्षपातपूर्ण ढंगबाट महाधिवेशन गर्न खोज्नुले केवल पार्टी कब्जा गर्ने नियत देखिन्छ’, पौडेल पक्षको निष्कर्ष छ, ‘महाधिवेशनको मिति तोकिसकेपछि पार्टीका विभाग एवं अन्य संरचनामा विभिन्न नियुक्ति गर्न वैधानिक व्यवस्था र महाधिवेशनको आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हो।’
नेता पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, पूर्वसहमहामन्त्रीद्वय डा. रामशरण महत र अर्ज‘ननरसिंह केसीसहित २७ जनाले विरोधपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूले केन्द्रीय विभाग गठन, पार्टी समायोजन, क्रियाशील सदस्यता वितरण, भ्रातृसंस्था र विदेश जनसम्पर्क समितिका विषयमा पछिल्ला समय पार्टी नेतृत्वबाट भएका कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
पार्टीभित्र तेस्रो धारका रूपमा चिनिने पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका कसैले पनि विरोधपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। केन्द्रीय सदस्यहरू गगनकुमार थापा, प्रदीप पौडेल र उमाकान्त चौधरी विरोधपत्रमा हस्ताक्ष गर्ने पक्षमा थिए। तर, सिटौलाले पार्टीभित्र ध्रुवीकरण नभई एकताको आवश्यकता रहेको भन्दै विरोधपत्रमा हस्ताक्षर गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए।
‘हामी सिटौलाजी, गगन, प्रदीपसहितका नेता बसेका थियौं। अहिले विवाद बढाउनेभन्दा पनि समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रह्यो’, सिटौलानिकट केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरीले भने, ‘मुख्य कुरा महाधिवेशन समयमै गर्ने भन्ने हो। यो विषयमा सभापतिले मान्नुभयो भने किन विवाद बढाउनु पार्टीमा?’ केन्द्रीय कार्यसमितिमा सिटौला पक्षका पाँच जना सदस्य छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा खगेन्द्र भण्डारीले खबर लेखेका छन् ।